Mowqifka Xukuumadda Soomaaliya ee dib u dhigista Dacwadda…
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka XFS Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) oo Warbaahinta la hadlay waxa uu soo bandhigay go’aanka Xukuumadda Soomaaliya ee la xiriira dib u dhigista dacwadda badda ee Maxkamadda caddaaladda caalamiga ah ( ICJ).
Dacwadda ayaa waqti dheer soo jiitameysay, waxaana markii saddexaad oo codsi ka yimid Kenya dib loogu dhigay tan iyo markii Maxkamadda ICJ loo gacangeliyay muran badeedkaan sanadkii 2014-kii.
Qorshihii ugu dambeeyay bishii September 2019 ee kasoo baxay Maxkamadda waxa uu ahaa in 8-da illa 12-ka Bisha June ee Soo socota lasoo gaba-gabeeyo sheegashada Kenya Badda Soomaaliya, balse Maxkamadda ayaa war xalay kasoo baxay dib ugu dhigtay ilaa 15-ka Maarso sanadka soo socda 2021-ka.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka ayaa caddeeyay in dowladda Soomaaliya mar waliba ay dooneysay in dacwadda la dhageysto xilligii loo qorsheeyay ee aheyd horraanta bisha soo socota, hase yeeshee dowladdu ay ku qasbantahay in ay u hoggaansanto amarka dib-u dhigista ee kasoo baxay maxkamadda.
Xukumadda Kenya ayaa maalmo kahor soo saartay dalab ah in aysan ka qaybgali Karin dacwadda Badda oo waqti ahaan kusoo dhawaaday, sabab la xiriirta xaaladda laga dhaxlay Covid-19, Dhibaato dhaqaale oo uu sababay xannuunka iyo qareenada oo aan la kulmi Karin Xukumadda.
Warqad ay u qortay Maxkamadda Cadaaladda Caalamiga ee ICJ ayaa ugu dambeyn laga aqbalay, waxaana dib loo dhigay go’aanka iyo marxaladaha ugu dambeeyo ee dacwadda bartamaha bisha Maarso sanadka soo socda 2021-ka.
axadle 2003 posts
Uganda:- Laba ruux oo Soomaali ah ayaa ka baxsaday…